FARMAJO OO IS-DHIIBAY | KEYDMEDIA ONLINE
FARMAJO OO IS-DHIIBAY
Dr. Xassan Shiikh Cali - Waxaa in mudo ah kolba madaxa derbi ku dhifanaayay Madaxweyne Farmajo, laakiin kama danbeystii tabartiisa siyaasadeed ayaa u run-sheegtay.MW FARMAJO OO IS-DHIIBAY
Doorashada 2020/2021-ka waxaa lagu xeerinayaa "Sharciga Doorashoyinka Qaranka ee Heer Federal", ee Labada Gole-ogolaadeen 2/2/2020, isla-markaasna Madaxweyne Farmaja-na saxiixay 20/2/2020 kii.
Iyo in doorashadu tahay "Hal-Qof-iyo-Hal-Cod".
Dhanka kale Madaxweyne Farmajo wuxuu diidanaa in aay dalka ka dhacdo "Doorasho la isla ogol-yahay xiligeedana ku dhacda".
Sida ku cad "Heshiiska Dhusa-Mareeb 3" Madaxweyne Farmajo waa ka tanaasulay labaddii qodob ee uu ku dheganaa sida ku cad "Heshiiska Dhusa-Mareeb 3".
Hase-yeeshee Madaxweyne Farmajo wuxuu si-indha la'aan ah ugu dhegan-yahay in Gudiga Madaxa-Banaan Ee Doorashoyinka Qaranku in uu hogaamiyo Doorashada 2020/2021-ka (fiiri Qodobka 13-aad).
Sidaas oo kale waxaa Madaxweyne Farmajo ku dhegan-yahay in "Heshiiska Dhusa-Mareeb 3" in la geeyo Golaha Shacabka (fiiri Qodobka 12-aad) ee heshiiska.
Hadiiba la tuuray ama dhinac la iska dhigay "Sharcigii Doorashooyinka Qaran ee Heer Federal" ee Madaxweyne Farmajo saxiixay 20/2/2020-kii, sharcigee ayeey Gudiga Madaxa Banaan ee Doorashoyinka Qaranku ku maamulayaan Doorashada 2020/2021-ka?
Dhab ahaantii Madaxweyne Farmajo jawaab uma haayo 2-daas su'aalood.
Culayska ka dhalan-doona labadaas arimood waxay horseedi-doonaan "Muran-siyaasadeed", sababta oo ah horay ayuu Madaxweyne Farmajo Golaha Shacabka ugu balan-qaaday in aanu aqbali-doonin in talada lala-garab maro Golaha Shacabka...Sidaas oo kale Maamul-Goboleedyada xooga leh sida Puntland iyo Jubbaland iyo Madasha Xisbiyada Qaran ma aqbali-doonaan in Gudiga Madaxa-Banaan ee Doorashoyinka Qaranku maamulo Doorashooyinka 2020/ 2021-ka sababta oo Gudigu mahaysto sharci uu wax ku maamulo.
Gebagebadii, Shirkii Dhusa-Mareeb 3" wuxuu sababi-doonaa "guul-daro siyaasadeed" oo u soo hoyata Madaxweyne Farmajo iyo "muran-siyaasadeed", oo saameeysa guud ahaan siyaasada Soomaaliya, gaar ahaan arimaha doorashooyinka ee 2020/2021-ka.
In uu si cad oo aan leex-leexad lahayn umadda Soomaaliyeed ugu sheego in uu aqbalay baaqii Maamul Goboleedyada, Madasha Xisbiyada Iyo Aqalka Sare ee ahaa in Dalka laga qabto "doorasho la-isla-ogolyahay isla markaasna ku dhacda waqtigeeda".
In Madaxweynuhu ku dhawaaqo 'Shirka Dhusa-Mareeb 4" isla markaasna horay usii sheego in wax lagu duldhisi-doono mirihii "Shirkii Dhusa-Mareeb 2", isla markaasna meesha laga saaray wixii ka soo baxay "Shirkii Dhusa-Mareeb 3".
Dr. Xassan Shiikh Cali